IGoogle Pixel 3 Lite ivuza ngokupheleleyo kwividiyo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IPixel 3 Lite ivuza ngokupheleleyo ividiyo
Emva kokuboniswa kwesizukulwana esitsha seePixels ngo-Okthobha, kwathiwa uGoogle wayesebenza kwiimodeli ezintsha, eziyilelwe ibanga eliphakathi. Uluhlu oluza kuza negama leLite. Malunga nezi modeli kubekho ukuvuza okuninzi Kwiinyanga ezidlulileyo, into leyo yenzeka ngoku kwakhona ngePixel 3 Lite. Kule meko, ifowuni ibhengezwe kwividiyo ngokupheleleyo.
Ngale ndlela, Sele siyazi uyilo olupheleleyo lwale Google Pixel 3 Lite. Ukongeza kwinkcazo esinokuyilindela kule modeli intsha yenkampani, eza kuthi isungulwe phakathi kuluhlu oluphakathi. Yintoni esinokuyilindela kweli lungu litsha lePixel?
Siyabona ukuba kuyilo, uphawu lubonisa into eyahlukileyo kwiimodeli zika-Okthobha. Asinanotshi kule Google Pixel 3 Lite. Izibophezele kwiscreen esiqhelekileyo ngakumbi, ngesakhelo esiphezulu esichaziweyo. Ikwiskrini esisi-intshi ezingama-5,56.
Ifowuni iya kuba ngaphakathi iprosesa ye-Snapdragon 670, yenye yezona zaziwa kakhulu kwaye zisetyenziswa kwi phakathi kuluhlu Kwi-Android. Iya kufika nge-4 GB ye-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi kwe-32 GB. Kwiikhamera, alukho utshintsho oluninzi xa kuthelekiswa neemodeli zokuqala. Ikhamera enye ngaphambili nangasemva.
Ikhamera engasemva iya kuba yi-12,2 MP nge-f / 1.8. Ngelixa ikhamera yangaphambili yayiya kuba yi-8 MP. Ngokubhekisele kwibhetri, kulindeleke ukuba le Google Pixel 3 Lite unebhetri yamandla angama-2.915 mAh. Ukudityaniswa kweprosesa inokunika isixhobo ukuzimela ngokwaneleyo. Ubukho bephonephone jack kwifowuni kuyamangalisa. Ngelixa ngokwenkqubo yokusebenza, iya kufika ngePie yemveli ye-Android.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ithiwe thaca njengenketho elungileyo yokuqwalaselwa phakathi kuluhlu oluphakathi kwi-Android. Okwangoku, akwaziwa ukuba le Pixel 3 Lite izakuqaliswa nini ezivenkileni, nangona kufanele ukuba yenzeke kungekudala. Ukongeza, okwangoku asinayo idatha iPixel 3 XL LiteEsikwaziyo ngoku ukuba iyaphuhliswa. Ucinga ntoni malunga noluhlu olutsha lwephakathi lwentengiso?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IPixel 3 Lite ivuza ngokupheleleyo ividiyo
Oppo Fumana i-X, enye iselfowuni eya kufumana i-ColourOS 6.0 esekwe kwi-Android Pie kungekudala